'एमसीसी पास गर्ने/ नगर्ने विषय अब संसदको' : प्रधानमन्त्री | Kendrabindu Nepal Online News
‘एमसीसी पास गर्ने/ नगर्ने विषय अब संसदको’ : प्रधानमन्त्री
६ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १६:५९
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्ने/ नगर्ने विषय अब संसदको भएको बताएका छन् ।नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले एमसीसी पास गर्ने/नगर्ने विषय अब संसदको भएको बताएका हुन् ।
जेठ २ गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको ‘बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी- रातमाटे-हेटौडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाईन’ को विषय उल्लेख छ । सोही विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले एमसीसी जस्केलाबाट ल्याउन खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढंगले बनाउनुपर्ने कुरा भएकाले पछाडी ढोका नभइ अगाडीकै ढोकाबाट बनाइने बताए । एमसीसी पास भए/नभए पनि लप्सीफेदी-रातमाटे-हेटौडा र लप्सीफेदी-रातमाटे-दमौली-बुटवल ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाईन बनि छाड्ने प्रधानमन्त्रीले बताए ।
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्य देशमा निर्यात गर्न पनि ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता पर्ने उनले बताए । ‘‘ठूलो लगानी गरेर उत्पादन भएको विद्युत कहाँ लाने ? डोकामा बोकेर लाने कुरा भएन । केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन । त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ । हामी बनाउँछौँ ।’’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने÷नगर्ने कुराको निष्कर्ष सदनले निकाल्नु पर्ने बताए । विगतको सरकारले गरेको सम्झौता अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हैसियतले अहिलेको सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको उनले बताए । अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता पारित गर्दैनौ भन्न नमिल्ने भन्दै ओलीले सम्झौताको परिपालना नभए कुटनीतिक विश्वसनियता, राज्यहरुका बीचमा गरेका सम्झौताहरुको विश्वसनियता र नीतिहरुको निर्णयहरुको स्थिरता तथा स्थायित्वको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।
ट्रान्समिसन लाइन बनाउने बुँदामा एमसीसी उल्लेख नभएको बताउँदै ओलीले सरकारले भोलिका लागि आज पेट काटेर, पटुका बाँधेर भएपनि बनाउने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विद्युतको व्यापार गर्नका लागि यसको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘लाइन नै नबनाइ विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्यापार गर्ने ? बंगलादेशसँग व्यापार गर्ने भनेका छौँ । अनि के गर्छौ ? कसरी लिएर जान्छौँ ? ट्रकमा त जाँदैन विजुली, रेलबाट, पानी जहाजबाट पनि जाँदैन ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ । त्यसैले लाइन बनाउछौँ भनेर भनिएको हो ।’’
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो गुणगान मात्रै गाएको भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा ओलीले स्थायी सरकार भएकाले दीर्घकालिन योजनाहरु सञ्चालन गर्ने नीति लिएको बताए । २ वर्षको अवधिमा सरकारले ३६ सय किलोमिटर बाटो निर्माण गरेको तथा ३ सय २५ पक्की पुल बनाएको उनले बताए । यो भन्दा तिव्र गतिले काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकारले दीर्घकालिन योजना बनाएर अगाडी बढेको बताएका छन् । अहिले कोरोना महामारीमा मात्रै केन्द्रीत नभएर भोलिका लागि पनि सरकारले योजनाहरु अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘‘अहिले महाप्रलयको कल्पना गर्ने ? अब मावन जाति रहँदैन भन्ने कुरा गर्ने ? आशावादी बन्नु पर्छ । केही वर्षको कुरा हो कोरोना नियन्त्रण गर्छांै छोटो समयमा अनि नेपाल एउटा विकशित राष्ट्र हुनेछ ।’’
प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च मनोबलले सफलता प्राप्त हुने बताउनुभयो । तेह्रौँ सागमा ३ वटा स्वर्ण जितेको नेपालले १४ औं सागमा ५१ वटा स्वर्णपदक जित्न सफल भएको उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘‘१३ औं सागमा तीनवटा स्वर्ण आएका थिए । भूकम्पले थिलथिल्याएको पूर्वाधार थिएन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा आएपछि पूर्वाधार विकास गरेर १४ औं सागमा ५०, ५१ वटा स्वर्ण पदक जित्यौँ । अघिल्लोमा ३ वटा, अर्को पाइला चाल्दा ५१ स्वर्णपदक कस्तो हुन्छ, मनोबल कस्तो हुन्छ उत्साह । हो त्यही उच्च मनोबल आत्मविश्वासका साथ सरकार अघि बढेको छ ।’’
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलहरुलाई काममा प्रतिश्पर्धा गर्न पनि आग्रह गरे । सरकारलाई असफल बनाएर, अलोकप्रिय देखाएर जनतामा भ्रम फैलाएर सफलता नपाइने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार अल्प अवधिको सरकार नभएको पनि बताए । उनले भने, ‘‘यो सरकार अहिलेलाई ५ वर्षको हो । पछिको कुरा पछि गरौला । पछिको कुरा अहिले भनेर मान्छेलाई झस्काउने चस्काउने किन पार्ने ? त्यो नगरौँ अहिलेका लागि यो सरकार ५ वर्षको हो । ५ वर्षको अगाडी देखि पछाडीसम्मका योजना बनाएर अगाडी बढेको छ ।’’
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नेपालले गरिरहेका प्रयास सफल सावित भएको उनले बताए । विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कोरोनाका कारण २ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको अवस्था भयावह नरहेको बताए ।
Prevआजबाट ६२ औँ वसन्तमा प्रवेश गर्दै ‘राते काँइला’
कोरोना अपडेटः विश्वभर ३ लाख २० हजारको मृत्यु, ४९ लाख संक्रमितNext
संसदबाट तत्काल पारित गर्नुपर्ने सर्तसहित एमसीसीको म्याद थपिदै
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिबारे पुनःविचार गरिँदै